» मिस नेपाल मेकअप काण्ड : रचना गुरुङले माफी मागिन्
मिस नेपाल मेकअप काण्ड : रचना गुरुङले माफी मागिन्
४ बैशाख २०७६, बुधबार ०७:३१
हेटौँडा, ४ बैशाख । मिस नेपाल २०१९ को काठमाडौँ अडिसनमा एक प्रतियोगीको मेकअपका विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा भएको विवादलाई मत्थर पार्ने गरी मिस नेपालकी निर्णायक रचना गुरुङ शर्माले प्रतियोगीहरुसामु माफी मागेकी छिन् । मिस नेपाल २०१९ का उत्कृष्ट २५ प्रतिस्पर्धीहरुलाई दिइएको तालिममा उनले सार्वजनिक रुपमा माफी मागेकी हुन् ।
मिस नेपालकी उत्कृष्ट २५ मा परेकी ललितपुरकी अस्मिता महर्जनसँग अडिसनमा भएको संवादका विषयलाई लिएर उनले माफी मागेकी हुन् । अडिसन र तालिमका क्रममा आफुबाट केही कडा अभिव्यक्ति समेत आउन सक्ने भन्दै उनले त्यसमा आफुलाई माफ गरिदिन आग्रह गरेकी छिन् । तर त्यस्ता अभिव्यक्तिहरुको उदेश्य प्रतियोगीहरुलाई भविष्यमा आउने चुनौतिहरुमा तयार पार्नु समेत रहेको उनले बताईन् । रचनाबाट कक्षा लिएपछि उत्कृष्ट २५ मा परेकी अस्मिता सहित धेरै प्रतियोगीहरुले रचना कडा भएता पनि उनलाई नजिकबाट चिन्न पाएको र मोटिभेटेट फिल भएको बताए । हेरौँ भिडियो रिपोर्ट–
रचना चर्चित अभिनेत्री आना शर्माकी आमा पनि हुन् । द हिडन ट्रेजरले मिस नेपालको सुरुवात गरेदेखि नै कोरियोग्राफरका रुपमा रहेकी रचनाले अडिसनमा ललितपुरकी अस्मिता महर्जनलाई मेकअप बिना किन आएको भनेर प्रश्न गरेकी थिईन् । मिस नेपालको अफिसियल अडिसनको भिडियो भन्दा पनि त्यसको केही भाग मात्र राखेर शेयर गरेको उक्त भिडियोमा अगाडि पछाडिका कुनै भाग थिएन । जसका कारण रचनाले बौद्धिक सुन्दरताको कदर नगरेको भन्ने आरोप लागेको थियो । यद्यपि मिस नेपालको पुरा भिडियोमा भने उनले कुन अर्थमा त्यो प्रश्न गरिन् भन्ने पनि खुलेको थियो । अस्मिता अहिले उत्कृष्ट २५ मा समेत छिन् ।
मिस नेपालको उत्कृष्ट २५ मा काठमाडौँकी निशा पाठक, पोखराकी एलिशा जोशी, काठमाडौँकी सोफिया भुजेल, रिया बस्नेत,अनुष्का श्रेष्ठ, जेन्नी महर्जन, ललितपुरकी अस्मिता महर्जन, काठमाडौँकी किरण थापा, प्रदिप्ता अधिकारी, ललितपुरकी निकिता कर्मचार्य, काठमाडौँकी रोज लामा,पोखराकी सारा बजिमाया, हात्तिवन ललितपुरकी लक्ष्मी राउत, काठमाडौँकी रक्षा उप्रेती, भक्तपुरकी मीरा कक्षपति, मोरङकी जेनिशा थपलिया, झापाकी पुजा श्रेष्ठ, चितवनकी विपना सुवेदी, ललितपुरकी सुभेच्छा अधिकारी, झापाकी प्रकृति कट्वाल, चितवनकी न्यान्सी बोगटी, भैरहवाकी शिवानी घिमिरे, काठमाडौँकी सान्त्वना मालाकार, प्रथा अधिकारी र भैरहवाकी संस्कृति घिमिरे रहेकी छिन् । उत्कृष्ट २६ मा परेकी पुनम पन्तले आफ्नो जागिरका कारण मिस नेपालको यात्रा छोडेपछि उत्कृष्ट २५ प्रतिस्पर्धीहरु मात्रै अहिले विभिन्न तालिमहरुमा सहभागी भईरहेका छन् ।
आदरणीय दर्शकबिन्द, तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? कृपया सल्लाह सुझाव कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला । उत्कृष्ट २५ मध्ये तपाईको विचारमा को बन्न सक्छिन् मिस नेपाल २०१९ ? यसको जवाफ पनि कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला । साथै यो भिडियोलाई लाईक र शेयर गरिदिनुहोला र अन्य भिडियोका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्न नभुल्नुहोला ।